2. Edhisheni nhau muna Ndira. Nhau nhema | Zvazvino Zvinyorwa
zvimwe nhau dzekunyora yaNdira, ino nguva kubva nhema nhema. Nesarudzo dzakasiyana dzemazita epasi rese senge iwo e William McIlvanney, Paolo Roversi kana Abir Mukherjee; uye nyika senge Santiago Diaz y Carlos Bassa. Isu tinotarisa.
1 Mapepa aTony Veitch -William McIlvanney
2 Baba vakanaka - Santiago Díaz
3 Denga Rinotungamira - Carlos Bassas
4 Murume kubva kuCalcutta - Abir Mukherjee
5 Vakapindwa muropa - Paolo Roversi
Mapepa aTony Veitch -William McIlvanney
Chechipiri zita yevakakurumbira glasgow trilogy uyo weScotsman William McIlvanney akatanga mukupera kwemaXNUMX. Iyo ine protagonist muongorori Jack Laidlaw, mupurisa airwadziswa uyo, shure kwake kuoma kuoma, viga a hukuru hwevanhu uye huchenjeri hwakawanda uye ndyaringo.
Pano isu tine Eck adamson, chidhakwa murume asina pekugara, anodana Laidlaw pamubhedha werufu kuti amupe shoko chimwe chinhu chakavanzika. Mariri muongorori anoda kuona kiyi yekugadzirisa iyo umhondi wepasi pevhu anoshora uye ajekese iyo kutsakatika kwaToni Veitch, mudzidzi ane pfungwa dzakanaka.
Ivo baba vakanaka - Santiago Diaz
Santiago Díaz ari kumashure kwe zvinyorwa yeterevhizheni dzakabudirira se Shamwari, Nhanho kumberi o Hapana anogara pano. Iye zvino anoputika munhau yematsotsi ine zita iri. Uye neechikadzi protagonist, saka fashoni munguva pfupi yapfuura.
Mariri anotiudza kuti mushure mekugamuchira alarm yekufona, mapurisa anowana mune chalet mudhorobha reMadrid a rakazara ropa murume nebanga nema prints ake padyo nechitunha chemukadzi wake.
Gore rimwe gare gare, mumwe murume mukuru anozvipira kumapurisa achizviti ndiye mukororo wevanhu vatatu vakashaika: gweta remwanakomana wake, mutongi akamupa mhosva, uye mudzidzi akamupomera pakutongwa. Achigutsikana kuti vatatu ava vakapfumbatiswa, murume uyu anovimbisa kuti mumwe achafa vhiki rega-rega kudzamara mhondi chaiyo yemuroora wake yasungwa uye mwanakomana wake asunungurwa.
Apa ndipo apo iyo Inspector Indira RamosHutsika hwakasimba kunge phobia yake utachiona. Ramos ichave chete mavhiki matatu ekugadzirisa nyaya pamberi payo "baba vakanaka" inoita zano rake.
Tungamira matenga - Carlos Bassas
Kuna Carlos Bassas del Rey ndakamubvunzurudza wekupedzisira Zvita. Munyori wemazita akadai Samurai inodzungaira o Murume asina zita, ikozvino inopa ino novel yakaiswa mukati Barcelona, in 1843.
Protagonist yaro ndeye Miquel Exposito, tsotsi rinobva pasi pevhu. Rini muviri we Víctor, shamwari yake yepamwoyo, inoita kunge yakasiyiwa mumukoto, Miquel, nerubatsiro rwe Andreu Vila, a gazetteer, uye na Mata naMonlau, anosarudza kuongorora zvakaitika. Iwe unozobva wawana chinoshamisa cheni yemhondi izvo zvinoita kunge zvinobva kumunyori mumwe uye nehukama hune njodzi nevanoverengeka vevane simba maindasitiri muguta pamwe neve kutengeswa kwevaranda kuCuba.
Murume anobva kuCalcutta - Abir Mukherjee
Mukherjee ndiye london uye imwe yeazvino kwazvo bestseller neiyi nhevedzano iyo nyeredzi kaputeni sam wyndham, murwi weHondo Yenyika Yekutanga ane ruzivo muScotland Yard.
Iri ndiro zita rekutanga rakatumirwa pano. Tiudze Kuuya kwaWyndham muCalcutta mushure mekupera kweHondo Huru, kwaanowana kuti guta rinosangana nezvose zvinodiwa kuti amugumise: hunyoro husingatsungiririki, mvura isina hutano, zvipembenene zvine chepfu uye, zvakatoipisisa, ruvengo rwevagari varo kune veBritain.
Wyndham anoshamisika kana zvese izvi zvingave zviri izvo zve kuponda kwemukuru mukuru mune imwe nzira yepasi. Uye usati wakwanisa kuwedzera kana kudzinga mweya unopenga wekare, unozviwana wakanyura mune tsvagiridzo izere nematambudziko.
Vakapindwa muropa - Paolo Roversi
Featured as mumwe wevanyori vakavanzika kwazvo nevatsoropodzi venyika yake, Roversi anojoinha muunganidzwa mukuru wekuti pane vatove vanyori veItari zvemhando iyi.
Mune ino novel yakaiswa mumakumi mapfumbamwe uye iripo, inotanga neChishanu cheKisimusi 1994, apo, zvichitevera chiratidzo chekupenya kwakapiswa musango muOffenburg, Germany, muviri wemurume muchando. Pahuro pake pakatemwa uye maoko akachekwa.
Parizvino tine Rebecca akasimba, one akangwara London chiremba wepfungwa uyo akavandudza hunyanzvi hwekurapa varwere vekutadza kwavo. Iyi nzira inoshanda zvekuti mumwe wevarwere vake, iyo Mukuru weRussia Grigory Ivanov, inosarudza kuisa iyo Management mabudazuva, yekutanga mumakiriniki akateedzana kutenderera pasirese ayo anobatsira kuporesa chero kupindwa muropa.
Pakati pezvishandiso zvakawanda zvinosvika kuti zvipinde Sunrise, zvinosarudzwa vanokwikwidza vanomwe kubva kunyika dzakasiyana uye nematambudziko akasiyana. Pakutanga zvese zvinoita kunge zviri kufamba zvakanaka, asi munguva pfupi vamwe varwere zvisinganzwisisike vanonyangarika. Saka vanotanga kuvapatsanura nekuvacherekedza kuti vasatize uyezve kuti vasabatane nekunze. Zvese izvi zvinotungamira kumutambo uyo uchave nemhedzisiro inoshamisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » 2. Edhisheni nhau muna Ndira. Nhema nhema
Ndatenda zvikuru nemazano !! Ngatitarisirei kuti aya mabasa matsva ari padanho rekufananidzwa kukuru kwemaitiro akadai sa'Loba Negra 'uye' Reina Roja '. Vanyori vemazuva ano vanowanzo tora mukana weichi fungidziro zvinobudirira, asi hazviunze hunyengeri hwakafanana nemabasa ataurwa pamusoro.
Rakanakisa rondedzero, ndiri kuzowedzera Mapepa aTony Veitch uye Ivo Baba Vakanaka kune angu runyorwa rwemabhuku ekuverenga. Ndatenda nemazano.
1. Edhisheni nhau muna Ndira. Mazita ekuremekedza munhu wese